Nnukwu faịlụ bulite - Iji ISEBOX si wuru aha ya bu faịlụ buru ibu buru ibu, bulite ma kesaa otu faịlụ ruo 5GB n’ogologo na-enweghị nsogbu na FTP na nbanye mgbagwoju anya. I nweghi ike ime nke ahụ site na email, WeTransfer ma ọ bụ YouSendIt. Ma ị nwere ike bulite ọtụtụ faịlụ ịchọrọ.
Dashboard na-arụkọ ọrụ ọnụ na-enye gị na ndị otu gị aka ịrụ ọrụ ọnụ, yana ọkwa ikike dị iche iche, na ọdịnaya na akụkọ. Ọ bụrụ na gị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ, ịnwere ike ịnye ha dashboard nke ha, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ n'ofe ha niile.